Tsy mahavaha olana ny fakofakom-politika sy ny forongony | NewsMada
Tsy mahavaha olana ny fakofakom-politika sy ny forongony
Par Taratra sur 08/11/2017
Kajikajy politika, efa anjato taona, tsy nahavaha ny olana misy eto Madagasikara kanefa mbola io ihany no hidedahana sy hanimbana firenena eto. Kabary tsy valina, lainga marivo tototra… Fiheverana ny vahoaka ho bado sy azo hambakaina hatrany. Tsy misy na kely aza ny fitiavan-tanindrazana sy fitiavan-tanin-drazana. Ny sasany miezaka ny mampanjaka ny halako bika sy tsy tiako tarehy. Mahavaha izany ve ny resa-politika ? Ny hafa, mitady mafy izay hisian’ny fifandirana etsy sy eroa noho ny fialonana. Voavahan’ny politika ve ny tahaka izany ? Raha nahavaha olana io fakofakom-politika lalaovin’ny Malagasy sasany io, efa tsy tahaka izao intsony i Madagasikara. Anisan’ireo firenena mahantra sy farahidiny eto ambany masoandro.
Mila miverina amin’ny maha Malagasy azy ny Malagasy. Izay paikady hanatanterahina izany no mahamaika. Goavana indrindra amin’ireny ny fitiavan-tanin-drazana sy fitiavan-tanindrazana. Fohazina avokoa ny fifanajana, fifanomezan-kasina, fahalalana ny tody ny tsiny. Fitsimbinana ny aina sy fifamatorana akaiky amin’Andriamanitra Andriananahary, sns. Mila iainan’ny Malagasy indray ireny. Tsy misy idiran’ny fakofakom-politika ny fanatanterahana izany fa mila finiavana sy fitiavana eo amin’ny tsirairay mihitsy.
… Ny tahotra ny hiverenan’ireo rehetra ireo no mampanahy ny mpanao politika sasany mbola baikon’ny vahiny. Raha ireo mantsy no hotanteraka, hiharihary toy ny tafika andrefan-tanàna ny zavatra tahaka ity : voasokajy ao anatin’ny tany mahantra indrindra i Madagasikara, kanefa manan-karena be (vatosoa, volamena, hazo sarobidy, harena an-dranomasina, sns). Ahoana ny mahatonga fifanoherana be tahaka izany ? Vokatry ny kajikajim-politika sy ny fakofakom-politika lalaovin’ny vahiny sy ny forongony eto Madagasikara ny niteraka io fifanoherana io. Tany manan-karem-be ity ka nahoana no lazaina fa mahantra ?
Mila hiverenana iainana ny maha Malagasy sy ny fahalalana ananany. Tsy azo hadinoina fa fahalalana ny an’ny Malagasy fa tsy finoana. « Raha tafaverina io fahalalana io, ny Malagasy no hifehy izao tontolo izao », hoy ny mpandinika iray izay.
Une réponse à "Tsy mahavaha olana ny fakofakom-politika sy ny forongony"
Flavien Jean-JacquesJaovelo 08/11/2017 à 15:52
Miandry 2018 fa gasy isika dia antsika no misoma